jeudi, 05 mai 2022 23:14
Ny teny hoe "Fanampiana" no niverimberina indrindra tamin'ity fitondrana ity
Miandrandra "Fanampiana" avy any ivelany, mba ahafahana manome "Fanampiana" ireo traboina, ireo mpampianatra Fram, ireo mpanao fanatanjahantena, ireo mahantra vokatry ny Covid-19. Fanampiana ny teti-bolam-panjakana avy amin'ireo "MPAMATSY" vola (aide budgétaire) Fanampiana ho an'ny Jirama sy mpamatsy solika, tafiakatra 1 miliara ariary latsaka.Fanampiana ireo kaominina sy Fokontany (Subvention). Fanampiana ireo mpitandro ny filaminana.
mardi, 03 mai 2022 22:08
Hafatra voaray avy amina Profesora iray entina dinihina alohan'ny atory
"Dia gaga re aho amin'ity firenena ity : Raha azoko izany dia rehefa mianatra ianao dia kely ny fiakaran'ny karamanao. 14 taona aho no afaka bacc, nianatra 21 taona aho taorian'ny Bacc, ary manohy mianatra hatrany na dia efa Profesora aza. Voasazy izany ny tena eh". Tafandria mandry.Patrick
vendredi, 29 avril 2022 20:24
Vaky siny kely : Tsy nisy sonia ny ankabeazan'ireo tambin-karama nomena
Araka ny tatitra ny Fitsarana momba ny kaonty, Cour des Comptes, ny volana febroary 2022, dia tsy nisy sonia ny ankabeazan'ireo tambin-karama, indemnité, nomena tamin'ny fitantanam-bola nentina niady tamin'ny Covid-19. Isan'izany ireo :- Tambin-karama nomena ireo mpanara-maso isan-trano ireo marary Covid-19- Ireo Miaramila nizara ny CVO- Ireo niasa teny amin'ny Village Voara sy Cnaps Vontovorona Nomena 2 000 000ar isaky ny Solombavam-bahoaka tamin'ny fitsinjarana ny "Vatsy tsinjo". Tafandria mandry e.Patrick (Loharano : Tatitry ny Fitsarana momba ny kaonty, Cour des Comptes, ny volana febroary 2022)
jeudi, 28 avril 2022 21:09
Vaky siny kely : Nitentina 650 milliards ariary ny vola nomena ny Jirama
Araka ny tatitra ny Fitsarana momba ny kaonty, Cour des Comptes, ny volana febroary 2022, dia nitentina 650 milliards ariary ny vola nomena ny Jirama tamin'ny fitantanam-bola nentina niady tamin'ny Covid-19. Ny anton'izany dia nahemotra ny fanefan'ny mpanjifa ny fakitira, ka nanetsenana ny banga ampitohy ny tolotra omen'ny Jirama. Nonerana 198 milliards ariary kosa ireo mpamatsy solika.Nomena 473 millions ariary ireo tanora mpilatsaka an-tsitrapo nisahana ny komity Loharano. Nandaniana 21 milliards ariary teo ny famatsiana ny "Vary mora"Nanofana ny fiaramanidin'i Kaompania Ethiopian Airlines ny 3 milliards ariary teo. Ary nanomezana fanampiana ireo mpampianatra Fram ny 106 milliards ariary. Tafandria mandry e.Patrick (Loharano : Tatitry ny Fitsarana momba ny kaonty, Cour des Comptes, ny volana febroary 2022)
mercredi, 27 avril 2022 19:32
Vaky siny kely : Nahatratra 1.9 milliards ariary ny fandoavam-bola lelavola tamin'ny fitantanana ny ady Covid-19
Araka ny tatitra ny Fitsarana momba ny kaonty, Cour des Comptes, ny volana febroary 2022, dia lasa fanao tamin'ny fitantanana ara-bolan'ny ady tamin'ny valanaretina Covid-19, ny fandoavana tamin'ny alalan'ny lelavola mivantana, espèce, fa tsy natao chèque na virement bancaire, izay takian'ny lalanan'ny fitantanam-bolampanjakana, araky ny andininy faha 6 amin'ny didim-panjakana 2004-319, mamaritra ireo fepetra fandoavam-bola ho an'ireo mpamatsy entana na servisy ho an'ny fanjakana. Nahatratra 1.9 milliards ariary izany ho an'ny fakitira fandoavam-bola 56 monja. - Ny TASK FORCE no nomena lelavola 541 400 000 ar ho ana Bon de décaissement 12 ;- Telma nahazo 200 000 000ar, natao lelavola ;- Restauration, amina fakitira 3, dia nomena lelavola 49 040 236,8ar- La Sakaf' nandoavana lelavola 6 233 092.00ar ho ana fakitira tokana. Tafandria mandry e.Patrick (Loharano : Tatitry ny Fitsarana momba ny kaonty, Cour des Comptes, ny volana febroary 2022) (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 26 avril 2022 22:14
Vaky siny kely : Aiza ny Bianco sy ny PAC amin'itony tatitry ny Fitsarana momba ny kaonty itony
Nanao tatitra ny Fitsarana momba ny kaonty, Cour des Comptes, ny volana febroary 2022, mahakasika ny fitantanana ara-bolan'ny ady tamin'ny valanaretina Covid-19. Tsy mila mandeha lavitra akory, fa vao mamaky ny fanoroham-pejy, dia efa mahita tsy fahatomombanana mihavosa tamin'ny fitantanana. Aiza ny Bianco sy ny fitsarana miady amin'ny kolikoly PAC, izay manana fahefana mandeha tsy voizina, tsy miandry mpitory, na autosaisine, rehefa misy fofompofona kolikoly na fanodikodinam-bola fotsiny.
samedi, 23 avril 2022 20:49
Rehefa teny angilisy ohatran'ny marevaka ery
Spring Meetings 2022, Washington DC International Monetary FundWorld Bank Group Mmm masaka be. Avy eo mihatrika ny fihaonanaRéunion des V20, Washington DC, 21 Avril 2022 Mampatsiaro ny G20 zato izy, fivorian'ny Firenena 20 matanjaka indrindra maneran-tany.. Jerena amin'izay ny fanalavana ny V20 = VULNERABLE 20. Koay, hay misy fikambanan'ny 20 gistra maneran-tany. Tsy mba mety andeha any aho hoe, hizesta hoe zahay mpikambana ao anaty V20, mandehana foana nareo hi werawera amin'ny Spring Meetings 2022, aleo zahay amboly vary ahasalama anay. Dia gaga ve ianao raha any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny no andraisany anao anatin'ny 5min, dia maka sary, dia tsy ampandrosoany any amin'ny foiben-toerany akory? Tafandria mandry e.Patrick
jeudi, 21 avril 2022 21:55
Kila raha intérim
Fitondrana intérim lava, asa na tsy manana olona, sa tsy manana olona mahay, izay tsy mampino, sa tsy atokisana ireo nanohana azy rehetra ? Tanfandria mandryPatrick
mercredi, 20 avril 2022 22:10
Taiza tsara hoe ilay fihaonana tamin'ny Filohan'ny Banky iraisam-pirenena
Voalaza foana manko fa tao Washington DC no nihaona ny Filoha Andry Rajoelina sy ny Filohan'ny Banky iraisam-pirenena ary ny tale Jeneralin'ny FMI. Malalaka be manko izany Washington izany. Sarotiny dia sarotiny amin'ireo tsy vita vakisiny Covid-19 manko ry zareo Amerikanina, ka manidy varavarana mihitsy ho an'ireo tsy vita vakisiny.Hatreto ny Filoha nilaza fa tsy nanao vakisiny ary tsy hanao vakisiny Covid-19. Ka mampametraka fanontaniana ihany hoe taiza izany no nihaona. Mety tsy dia misy dikany ny toerana nandraisana, na taiza io na taiza, na fotoana fohy ihany aza ny fihaonana. Rehefa mijery ny tatitra ao amin'ny tranonkalan'ny Banky iraisam-pirenena dia manindry mafy ny fanaovam-bakisiny, izay antoka ampandrosoana ny fizahan-tany, ny Filohan'ny Banky iraisam-pirenena, manamafy, fa mila mangarahara ny fitantanana, ny ady amin'ny kolikoly, ny fialana amin'ny fifanarahana ara-barotra amin'ireo mpamokatra herinaratra izay midangana ka manavesatra ny fandaniana amin'ny teti-bola. Tafandria mandry e.Patrick
Matetika dia samy fianakaviana ihany no miloka manao ramy, na manao loto. Andeha atao hoe fialam-boly, fa rehefa zohina, dia tsy misy famokarana na fampitomboana harikan-karena na ny kely aza, satria dia ny vola ao ampaosin'ny iray ihany no mifindra tanana mandeha amin'ny iray hafa, dia mifandimby banky, na very vola tanteraka eo. Dia io very vola io mitrosa amin'ilay nahazo ny volany indray, mety misy zanany kely aloany amboniny, fa ny eo ihany no miodikodina eo. Mila tsakitsaky sy zava-pisotro kely mandritra ny loka na lalao, nefa dia fianakaviana eo ihany no manao ilay tsaky, dia mihodina eo ihany ny vola, tsy nisy tombony mivaingana ho an'ilay fianakaviana, fa nifandimby nandray vola sy banky fotsiny ny tsirairay. Toy izany ny toe-karena eto amintsika, tsy misy mamokatra firy, fa ny atsasaky ny olona mpivarotra, ny atsasany mpividy, samy mihaona eny an-tsena, tsy misy mamokatra, fa ny eo ihany no miodikodina samy isika eo.